Qaybta 1aad: Sida loo Dhegayso Online?
Qeybta 2: Sida loo soo dejisan iyo maqli offline?
Qeybta 3: Sida loo hagaagsan ka iPhone in Apple Watch?
Qeybta 4: Sida loo ciyaaro music deegaanka aad Apple Watch?
Qeybta 5: Download hoorto music free qalabka la TunesGo
Apple Music waa mid aad u gaar ah adeeg geeyo music Apple oo ku siinaya caashaqi jiray music iyo milkiilayaasha qalab macruufka ah fursad ay ku sahamiyaan, ogaado iyo helitaanka malaayiin kuwan raadkaygay. Kani waa adeeg lacag leh oo waa u bilaash ah 90 maalmood ee ugu horreeya iyo bixiyaa khibrad music cajiib ah. Haddii aad rabto in aad dhegaysato music playlist Apple on your Apple daawadaan halka ka shaqeeya, ordaya ama sameynta hawlaha kale ee markaas aad ku farxi doonaan in ay ogaadaan in qalab this qaban karto A.villa 2 GB of music iyo ciyaari kartaa Apple Music ee playlists aad u. Hab kaas oo aad dhagaysan kartaa online Kuwa soo socda waa:
Talaabada 1: Si aad u isticmaasho oo aad Apple sug dhagaysto music Apple, in aad marka hore u baahan doontaa si aad u hubiso music ah waxaa laga heli karaa adiga oo iPhone dhegeysi- deegaanka.
Talaabada 2: Waayo, kanu, aad abuurtaan karaa app music ku saabsan iPhone.
Talaabada 3: Hadda waxa aad u baahan doontaa in ay tagaan playlist in aad rabtid in aad ka soo dejisan ama dhageyso on your watch Apple.
Talaabada 4: Hadda waxa aad u baahan doontaa in xubnuhu aad iPhone in aad Apple Watch iyo waxa la qaban karaa iyada oo loo marayo Bluetooth ama la headphones.
Talaabada 5: Hadda waxaad si fudud u dhegeysan kartaa muusikada online aad Apple Watch.
Apple Watch waa qalab la yaab leh taas oo keliya ma idin tusiyaa markii laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay qaado calls, helaan farriimaha, tuso xaddiga garaaca wadnahaaga iyo ulajeedooyinka kale oo badan iyo waliba. Mid ka mid ah ujeedooyinka ay u adeegto waa in ay awood u aad u dhegaysato muusikada. Qalabka wuxuu u yimaado leh meel xusuusta gudaha of 2 GB taasoo la micno ah in aad si fudud u keydin karaa songs ku yaal iyo sidoo kale ka dhigi kartaa maktabadda songs Apple Music heli karo waxaa ku. Laakiin in sidaas la sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo heesaha oo ku saabsan Phone in hab dhagaysiga offline. Tan waxaa la samayn karaa adigoo raacaya taallaabooyinka siiyo:
Tallaabooyinka 1: Tallaabada ugu horreysa waa in aan bilowno music app inankeeda aad iPhone ama ka hadba qalab aad rabto in lagu wareejiyo playlist ah.
Talaabada 2: haatan waxaad u baahan tahay in ay doortaan in ay ama u tag playlist in aad dooneyso in aad kala soo bixi on your Apple Watch.
Talaabada 3: Tubada badhanka ka sii samaysaa offline heli karo 'waa dhinaca midig oo Music iyo markaas.
Talaabada 4: playlist iyo heesaha oo dhan in ay ka mid bilaabi doonaa duuban isla markiiba si ay u qalab aad. Waxa kale oo aad ka arki kartaa horumarka download this by siyoodba birta ku download. Marka dajinta lagu sameeyo, waxaad ka heli kartaa in ka playlists deegaanka.
Hadda oo aad sameeyey heeso ama playlists la heli karo si aad qalab loogu offline dhagaysiga, qaybta xigta waa in ay u hagaagsan playlist in ay ka mid yihiin heesaha oo dhan ay ka iPhone in aad Apple daawado si aad ku raaxaysan karaan heesaha. Syncing playlists ka iPhone in aad Apple Watch waxay sidoo kale waa hab aad u fudud. Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka la siiyey hoos ku qoran si ay u sameeyaan u hagaagsan ama kala iibsiga.
Talaabada 1: Tallaabada ugu horreysa ee aad u baahan tahay in ay raacaan si ay u hagaagsan playlists ay ka mid yihiin heesaha oo dhan waa in aan bilowno Apple ka daawan app aad iPhone ama qalabka kale ee macruufka.
Talaabada 2: Ka dib markii isagoo sidaas samaynaya, raadiyo doorasho Music iyo tubbada ku yaal.
Tallaabo 3: Ka dib markii laga faaiidaysanayo on doorasho Music ah, waxaad u baahan doontaa inay hesho on "playlist Synced '.
Talaabada 4: Hadda waxa aad u baahan tahay inay hesho on playlist ah oo aad dooneyso in aad u hagaagsan in aad watch Apple.
Talaabada 5: Hadda xiriiriyaan Apple daawado si ay xeedho si nidaamka hagaagsan bilaabi karaan. Ka dib markii syncing ay ka badan tahay, playlist awood u yeelan doontaa in aad aad Apple sug dhagaysto.
Apple Watch waa qalab fiican ma ahan oo keliya, waayo, Maxaa yeelay, waqtiga iyo wacay iyo fariimo laakiin sidoo kale ciyaaro iyo dhagaysiga muusigga. Ka sokow ka music app Apple ciyaaro music, qalab this sidoo kale ka ciyaari kara music kaydiyaa degaanka si aad ku raaxaysan karaan halka ka shaqeeya, shaqada guriga reerka iyo hawlaha kale. Habka uu u ciyaaro aad music deegaanka aad watch Apple waa mid fudud. Raac talaabooyinka lagu in sidaas la sameeyo:
Talaabada 1: Tallaabada ugu horreysa waa in aan bilowno app music ku saabsan Apple Watch.
Talaabada 2: Hadda tallaabada xigta waa in uu ku qasbo jaraa'id si doorasho lagu soo bandhigi kartaa in aad.
Talaabada 3: Hadda waxa aad u baahan tahay inay hesho on il ka dibna dooro Apple Watch.
Talaabada 4: Tallaabada xigta waa in xubnuhu aad Apple daawado si headset Bluetooth ah in kiiska ma waxaa loo sameeyaa si mar hore.
Talaabada 5: Hadda waa in aad xulan song in aad rabtid in aad ka ciyaaro aad watch Apple oo wuxuu ku raaxaysan music ah.
Download geeyo music lacag la'aan ah TunesGo deviceswith
> Resource > Music > Sida loo raaxaysta Apple Watch Music